ကြွက်များ၊ Squirrel ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံမှ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာပြားများကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံး Bird Barrier Solar Panel Pigeon Proofing Kit | Tengfei
stainless steel ဆိုလာပြားကွက်
Plastic Base ငှက် spikes
Stainless steel Base ငှက် spikes
Bird Barrier Solar Panel Pigeon Proofing Kit သည် ကြွက်များ၊ရှဉ့်များထံမှ ဆိုလာပြားများကို ကာကွယ်ရန်
8" x 100ft၊ 6"*100ft၊ အရည်အသွေးကောင်း PVC Coated သွပ်ရည်ပြားကွက် တစ်လိပ်သည် ကွေးနိုင် သို့မဟုတ် ဖြတ်နိုင်သည့် ဆိုလာပြားများ ပတ်လည်တွင် ဒဏ်ခံရန်အတွက် အံကိုက်ဖြစ်သည်။
အပေါက်အရွယ်အစား: 12.5mm x 12.5mm
1. UV Stable အထူးကျွမ်းကျင်သူကလစ်များ။
ဆိုလာပြားအောက်ရှိ ခိုများနှင့် ပိုးမွှားများကို စနစ်တကျတပ်ဆင်သည့်အခါတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်။ 1/2" ဝါယာကြိုးသည် အခြားထုတ်ကုန်များ ပျက်ကွက်နိုင်သည့် ထိရောက်သော ကြာရှည်ခံသော ဖယ်ထုတ်ခြင်းစခရင်ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းကို စိတ်ကြိုက်ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ကွေးနိုင်ပြီး နေရာတွင် ကော် သို့မဟုတ် ဝက်အူလှည့်နိုင်သည်။
ဝါယာကြိုးကို လိပ်များဖြင့် ပံ့ပိုးထားသည်။ အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ခေါင်မိုးပေါ်မတက်မီ ခြောက်ပေအရှည်ရှိ ဖြောင့်ဖြောင့်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အရှည် 2" X 4" သစ်သားကို အသုံးပြု၍ ကွက်ကွက်၏အောက်ခြေ လက်မကို 30 ဒီဂရီခန့် ကွေးပါ။ ဤ "ကန်ထုတ်ခြင်း" သည် ကွက်ကွက်ကို ခိုင်ခံ့စွာသော့ခတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Pigeon Guard (Black PVC Coated Galvanized Welded Wire Mesh) ကို အထူးပြု သက်ရောက်မှုမရှိသော တွယ်ကပ်ကိရိယာများဖြင့် တပ်ဆင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ဆိုလာပြားများအောက်တွင် နေထိုင်သည့် Pigeons နှင့် တိရစ္ဆာန်များ မည်သည့်အခါမျှ ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေသည်။
ပုံမှန်ဆိုလာပြားတစ်ခုသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမြင့် 1.6 မီတာနှင့် အကျယ် 1 မီတာရှိပြီး၊ ပုံမှန် panel တစ်ခုတွင် အလျားတစ်ခုစီတွင် ကလစ်3ခုနှင့် အစွန်းတစ်ခုစီတွင် ကလစ်2ခုကို အသုံးပြုသင့်သည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပုံမှန်တပ်ဆင်မှု၏နမူနာတစ်ခုအတွက် ဤထုတ်ကုန်စာရင်းတွင် ပူးတွဲပါရှိသော ပုံကြမ်းကို ကြည့်ပါ။
● မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ထားသော ပလပ်စတစ်ကလစ်များသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် တည်ငြိမ်သောကြောင့် အကန့်များ ခြစ်ရာမခံရပါ။
● အပိုင်းများကို 18 လက်မတိုင်း အကြံပြုထားသည်။
● နှုတ်ခမ်းများသည် တူးဖော်ခြင်းအပေါက်များ သို့မဟုတ် စနစ်အား မထိခိုက်စေဘဲ အကွက်များနှင့် ချိတ်ထားသည်။
● မြေပြင်မှ မမြင်နိုင်လုနီးပါး
● တပ်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်သော Tin ဖြတ်ပိုင်းများနှင့် အခြားအခြေခံကိရိယာများ
မထိုးဖောက်နိုင်သော ဤစနစ်သည် မြန်ဆန်ပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ အာမခံချက်ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဤအခင်းအကျင်းများသည် ငှက်များနှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ခိုကိုးရာကို ပံ့ပိုးပေးကာ အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် ဖြေရှင်းချက်အတွက် အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်နေကြသည်။
ယခင်- Critter proofing ဆိုလာပြားများအတွက် အသုံးပြုသည့်6in X 100ft ဆိုလာပြားငှက်/Critter Guard Roll Kit
နောက်တစ်ခု: 100pcs အလူမီနီယမ် ချိတ်များပါသော ဆိုလာပြား ငှက်စောင့်ကြိုး
ဆိုလာပြား Wire Mesh Critter Guard Clips
ဆိုလာပြားစကတ်သည် သင်၏ဆိုလာပြားကို သက်သေပြသည်။
ဆိုလာပြား ခိုငှက်များ အဟန့်အတား ကွက်ဂ...
စက်ရုံတိုက်ရိုက် Stainless Steel ဆိုလာပြားကွက်...
30M ဆိုလာပြား ငှက်ကွက် ဖယ်ထုတ်မှု အစုံ
အမှတ် ၁၁၊ JingEr လမ်း၊ အရှေ့စက်မှုဇုန်၊ Anping ကောင်တီ၊ Hebei၊ တရုတ်
ပိုးမွှားတွေကနေ ဆိုလာပြားတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
ငှက်ထိန်းသိမ်းခြင်းမှ ဘေးကင်းရေး စစ်တမ်းကောက်ချက် ၆ ချက်...
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2022 : All Rights Reserved. Hot Products များ - ဆိုက်မြေပုံ
ငှက်ပေါက်များကို ရှင်းလင်းပါ။, ဆိုလာပြားများအတွက် Anti Bird Net, Galvanized Steel Mesh ဆိုလာပြားများ, Solar Panels များအတွက် Bird Deterant, ဆိုလာပြားများအတွက် Stainless Steel Mesh, ဆိုလာပြားခိုပြဿနာ,